ျမန္မာသတင္းစံု – Page 494 – Welcome MMREPUBLIC
အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ် စိတ်မနှံ့သူသမီးကို ရေထဲဆင်းရှာကျွေးနေတဲ့ ၈၁ နှစ်အရွယ်အမေ
Unicode အမေဆိုတာ ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် သားသမီးတွေကို ပစ်ခွာသွားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး…..အမေ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းဟာ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတာပါ..ပေးဆပ်ပြီးလည်း ချစ်ကြသူတွေပါ… ဗီယက်နမ်က ငုရင်သီရိုအမည်ရတဲ့ ၈၃ နှစ်အရွယ် အဘွားတစ်ယောက်ဟာ စိတ်မနှံ့တဲ့ သမီးလေးကို ပင်လယ်ရေထဲမှာ ဈေးရောင်းရင်း ရှာကျွေးနေသူပါ…….စိတ်မနှံ့တဲ့ သမီးလေးဟာ ငယ်ငယ်လေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး… အသက် ၆၁ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်…… ခင်ပွန်းရှိစဉ်အခါက စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေပေမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ အဘွားကိုယ်တိုင် သမီးဖြစ်သူကို ပင်လယ်ရေထဲ ဈေးဆင်းရောင်းပြီး ရှာကျွေးခဲ့ပါတယ်… ဈေးမရောင်းရရင် စားစရာမရှိတဲ့ သူတို့ဘဝကို သနားတာကြောင့် ငါးရှာ၊ ကဏန်းရှာသူတွေက အဘွားကို Read more
သက်တော်(၃၀)အရွယ်ဖြင့် ရဟန်းကိစ္စပြီးစီး၍ ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသော အံ့ဖွယ်ထူးခြားသော ဆားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
Unicode စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဆားတောင်ကျေးရွာအုပ်စု သင်းတွဲရွာဇာတိဖြစ်၍ ဆားတောင်ဆရာတော်ဟုထင်ရှားကျော်ကြားသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးတပါး မြန်မာ နိုင်ငံ၌ပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူး၏။ ထိုဆရာတော်ကြီး၏ အကြောင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဘွယ်ကောင်းလှ၏။ အတိတ်ဘဝက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူကုလားဖြစ်စဉ်တွင် ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို သက်တော်ထင်ရှား ဖူးမြင်ခဲ့ဘူးကြောင်း၊ ဘုရားရှင် ရွာတရွာ၌ ဆွမ်းခံကြွစဉ် ရုတ်တရက်လမ်းမှာဆုံခိုက်ငှက်ပျောခိုင်ကို ခုတ်၍ လှူဒါန်းပြီး ဆုတောင်းခဲ့ရာ…သာသနာနောက်ပိုင်း ရဟန်းကိစ္စပြီးလိမ့်မယ်လို့ ဘုရာရှင်ကဗျာဒိတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင် စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တရားအားထုတ်ခဲ့ရာ သက်တော်(၃၀)အရွယ်-(၁၃၁ရ)ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၈)ရက်နေ့ နံနက်(၂)နာရီအချိန်တွင် အာသဝေါကင်းကွာရဟန္တာဖြစ်တော်မူကြောင်း ဆရာတော်ကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိတွင် ဖတ်ရှုရ၏။ ရဟန်းကိစ္စပြီးတော်မူပြီးနောက် ဆရာတော်ကြီးအား ရပ်ဝေးရပ်နီးမှာဖူးမျှော်သူများနှင့် Read more
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၇ နှစ်ကျော်က ရွှေတိဂံပုံစံတူစေတီတော်ကို အမေရိကန် တောတွင်းမှာတွေ့ရှိ
Unicode ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အတော်ပြန့်ပွားခဲ့ပါတယ်…..ခုဆိုရင် အမေရိကလို တောင်အာဖရိကလို ဒေသတွေဆီမှာပဲ ပြန့်ပွားပြီး ကိုးကွယ်သူတွေ များပြားလာတာပါ…. အခုဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၇ နှစ်ခန့်က စေတီတော်တစ်ဆူကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တောထဲတစ်နေရာကနေ ရှာတွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်….. အဆိုပါစေတီတော်ဟာ မွန်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဦးသီလဝံသတည်ထားခဲ့တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတော် စေတီဟောင်းတစ်ဆူဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးပိုင်တဲ့ သစ်တောထဲမှာ ရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ 7Day က ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိရှိရပါတယ်…. ဒီလို ရှေးဟောင်းစေတီတော်ကို အမေရိကန် တောတွင်းကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူတွေကတော့ ပိုင်းလော့ဆရာ တော်နဲ့ Read more
ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ ကွယ်လွန်သွားသွားတဲ့ အမေ့ပုံတူအရုပ်နဲ့ ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းသား
Unicode ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမေကိုယ်စား အမေ့ပုံစံတူအရုပ်နဲ့ ဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသားဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Paulo Johnက ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့က ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ဂျူလိုင်လ 16 ရက်နေ့က Twitter မှာ တင်လိုက်တဲ့အခါ retweet 4600 ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ Paulo က ဘွဲ့ဝတ်စုံကို ဝတ်ထားပြီး ဘေးမှာက သူ့အမေကိုယ်စား ပုံစံတူ စက္ကူရုပ်ကြီးနဲ့အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ် ။ “ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ မေမေ့သား အကြီးဆုံး ဘွဲ့ယူနိုင်ခဲ့တာ မေမေပျော်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ မေမေ့ဆန္ဒအတိုင်း သားဘွဲ့ရသွားပါပြီ Read more
အသက် ၉၀ ကျော်လို့ ၁၀၀ ပြည့်တော့မယ်။ စျေးမှာ အလှုခံနေတာတွေ့တော့ အဘကိုအလှူခံထည့်ရင်း ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့ အဘဦးခင်မြင့်က အဘမသေခင်လေးထပ်လှုချင်လို့ အလှူ ခံနေတာပါလို့ပြောတော့ မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ် ရသမျှကိုမစားမသောက်ပဲစုပြီးကို လှူတာပါ။ သူလက်ဖက်ရည်သောက်ချင်တာတောင်ဝယ်မသောက်ပါဘူး အဘကိုလဘက်ရည်လေးလှူပါဆိုပြီးသူများ လှူမှသောက်တာပါ ။ အနှစ်နှစ်အလလ အလှူခံရတဲ့ ငွေလေးတွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် မသုံးဘဲအပ်ထားပြီးကျောင်းဆောင်ဆောက်လှူခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့ကပုခန်းကျောင်းတိုက်မှာ အဘ လှုဒါန်းထားတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးမှာ ထိုင်ရက်ကလေးတံမျက်စည်း လှဲနေတာမြင်ရတော့အဘ ရဲ့ ဘာသာသာသနာအပေါ် ချစ်တဲ့စိတ်ကို မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး လှူခြင်တဲ့ ဆန္ဒလှူခြင်တဲ့ စိတ် လှူခြင်တဲ့ Read more
သက်တော် ၁၀၂ ရှိပေမယ့် တစ်ပါးတည်းသွားလာ သီလပေးတရားတွေချီးမြှင့်ပေးနိုင်သေးတဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး
အသက်ရာကျော်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရှားသွားပါပြီ…အစားအသောက်အနေအထိုင်ကအစ အင်မတန်ဂရုစိုက်နိုင်မှာ ကျန်းမာသက်ရှည်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…ခုပြောပြမယ့် ဆရာတော်ကြီးကတော့ သက်တော် ၁၀၂ နှစ်တိုင်အောင် ကျန်းမာလျက်ရှိပြီး သီလပေးတရားတွေကို ဟောကြားပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်… သက်တော်ရှည်ရခိုင်ဆရာတော် ဦးပညာသာရဟာ သက်တော် ၁၀၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဖူးကျေးရွာဥသျှစ်ပင်နှင့် ၂ မိုင်ခွဲကျော်ကျော်မှာရှိတဲ့ ပုသိမ်-မုံရွာ လမ်းဘေးက ကျောက်ဖူး စံပြကျေးရွာကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူပါတယ်… သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ဖြစ်ပေမဲ့ မည်သူ့အကူအညီမျှ မယူဘဲ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သလို မိမိဝေယျာဝစ္စ မိမိဘာသာ လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်…ဒါ့အပြင် ဆရာတော်ဟာ သီလပေးတရားတော်တွေကို Read more
လူသားဘဝကနေ ကျောက်တုံးဘဝကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာနေတဲ့သမီးလေး
Unicode အိန္ဒိယနိုင်ငံက အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ ရာဂျက်စ်ဝါရီ ဟာ ရှားပါးလွန်းလှတဲ့ အရေပြား သန္ဓေပြောင်းလဲမှုရောဂါတစ်ခုကြောင့် လူစင်စစ်ကနေ ကျောက်တုံး ကျောက်ဆိုင်ဘဝကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်…. သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မျက်နှာနဲ့ ရင်ဘတ်ပိုင်းလေးသာ ကျန်ရစ်တာဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကတော့ ကျောက်တုံးကျောက်ဆိုင်တွေလို အသားမာတွေတက်နေတာပါ……ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၂၄ ခုပဲရှိဖူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ရှားပါးလှတဲ့ မျိုးဗီဇသန္ဓေပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်… ရာဂျက်စ်ဝါရီဟာ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ဒီလို နာကျင်ဆိုးရွားပြီး ရှားပါးလှတဲ့ ရောဂါကို ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…လက်ရှိအချိန်မှာလည်း Read more
သူတို႔ႏွစ္ဦးထိုးသတ္မယ့္ အခ်ိန္၊ေနရာနဲ႔ေန႔ရက္အတိအက်ကိုေတာ့ One Championship
မေန႔ က ဂ်ာကာတာမွာ ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ONE Championship – Warrior’s Code ၿပိဳင္ပြဲမွာ နယ္သာလန္ နိုင္ငံသား ဖိုက္တာ Reinier De Ridder က ဘရာဇီး ဖိုက္တာ Leandro Ataides ကို အနိုင္ယူကာ ေအာင္လအန္ဆန္ရဲ့ မစ္ဒယ္ဝိတ္ခါးပတ္ကို စိန္ေခၚခြင့္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ De Ridderက ပြဲအၿပီးမွာေ တာ့ “ေအာင္လ မင္းအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား၊ မင္းႀကိဳက္တဲ့ေနရာ၊အခ်ိန္နဲ႔ေန႔ကိုေျပာ လိုက္ပါ၊မင္းေရြးခ်ယ္ဖို႔ထိုက္တန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။မင္းခါးပတ္အတြက္ငါလာၿပီ”လို႔ စိန္ေခၚခဲ့တာပါ။ ေအာင္လအန္ဆန္ကိုယ္တိုင္ကလည္း De Ridder ကို Read more
Sniper သမားက အေပၚစီး အျမင့္ကေန ေသနတ္သမား Foodland ေျမေအာက္ထပ္ကိုအဆင္း မွန္ေတြၾကားကေန ျဖတ္ပစ္သြားပါတယ္(စက္ဝိုင္းနီ)
# 2020 ပြဲသိမ္း ▪ထိုင္း Supermarket ထဲကတိုက္ပြဲ တကယ္ သိမ္းသြားပါၿပီ ▪ဗိုက္ဆာလို႔ Supermarket ထဲက Foodlandကိုအသြားမွာ အျပန္အလွန္ ပစ္ၾကတာပါ ▪ေသနတ္သမား ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္သားက သင္တန္းမိ်ဳးစံုဆင္း လက္ေျဖာင့္သမားပါ ▪ဒဏ္ရာ ရေနတဲ့ၾကားက ဒရြတ္တိုက္သြားေနတဲ့ ေသြးစီးေခ်ာင္းကို ေတြ႕ေနရပါတယ္ ▪CCTVေတြကို ေသနတ္သမားက ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး ထားပါတယ္
မိန်းမ ၃၂ ယောက်ယူခဲ့တဲ့ သာစည်ရွာက မြန်မာ့သူဌေးကြီး
Unicode ကိုလိုနီခေတ်က သူဌေးကြီးဦးဘိုးရှိဟာ တရားဝင်ဇနီး ၃၂ ယောက်ယူခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်….မြေပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး လယ်ပိုင်ရှင်များထဲမှာမှ နှစ်စဉ် နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ငွေ အများဆုံး ပေးသွင်းခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကနေ သူဌေးဘွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ မြန်မာ့သူဌေးကြီး ဖြစ်ပါတယ်…..ဦးဘိုးရှိဟာ သာစည်ရွာမှာ သူ့ရဲ့ ဇနီးတွေနဲ့အတူ သုံးထပ်တိုက်တစ်လုံးဆောက်ပြီး နေထိုင်ခဲ့သူပါ….. လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကိုလိုနီခေတ်က သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ သုံးထပ်တိုက်ဟာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီး ဘေးအကာအရံတွေသာရှိတော့ပါတယ်….အဆိုပါ သုံးထပ်တိုက်နေရာမှာ သူဌေးကြီးဦးဘိုးရှိရဲ့ ရုပ်ထုကို ထားသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်….. သူဌေးကြီး ဦးဘိုးရှိဟာ တရားဝင်ဇနီး ၃၂ ယောက်ထိ Read more
Previous 1 … 493 494 495 … 528 Next